Alohan'ny tena itondrako ny fanazavana sy adihevitra dia tsy misy tsy mahalala fa i Mahajanga dia mandray olona mpizahatany Malagasy sy vahiny maro isan-taona. Midika izany fa mampidi-bola maro isan-taona izany. Tsy mba tonga saina ve ny rehetra izay tompon'andraikitra fa tokony handraisana fepetra ity resaka olona dobo an-dranomasina isan-taona ity?
Raha ny resaka fampandrosoana sy ho fampiroboroboana ny fizahantany fotsiny? Ny tena goavana ary mampalahelo dia mikasika ain'olona mihitsy izy ity. Marihiko etoana fa raha ny manodidina ny ranomasina no resahina dia tsy tokony hisy tompon'andraikitra hanamaivana ny loza miseho matetika ao noho ny fananan'i Mahajanga toerana izay manofana olona amin’izany ranomasina izany.
Misy moa ny fotodrafitr’asa vita ao an-toerana, izay mahafinaritra ary mahasarika olona maro ao amin’io Village Touristique io.
Misy toerana ho an'ireo "vigies " na mpamonjy raha sendra misy loza. Ny mampalahelo dia trano foana no hita ao. Dia izao faty olona isan-taona izao ny vokany.
Ny mpizahatany izay hamonjy ranomasina dia tsy mahalala velively ny mety ho loza miandry azy, tsy mahalala ny toetoetry ny toerana izay alehany fa ny hilomano no ao an-tsainy sy ao an-dohany.
Ny fanontaniana apetrako ary dia iza no tompon'andraikitra voalohany tokony nandray andraikitra mba nisorohana ny loza? Ny ao amin'ny fizahantany ve? Ny tompon'andraikitra mikasika ny ranomasina ve? Ny mpizahatany ve?
Ny hamaliako azy dia mamelà ahy mba hanazava tsotsotra ny antony iray izay mahatonga ny loza tahaka ny mpiseho matetika.
Raha jerena ny sarintany mikasika an'i Mahajanga dia misy vavarano lehibe izay mampisaraka an’i Katsepy sy Mahajanga ka io toerana io no antsoina hoe : Bombetoke (La baie de Bombetoke). Raha mitodika mianandrefana ny maso eo amin’ny sarintany (carte marine) dia tsikaritra fa misy torampasika izay antsoina hoe : "banc de narcissius" izay tsy hita maso nefa kosa mazava tsara amin’ny sarintany.
Noho ny fisian'ireo rehetra ireo (vavarano sy torapasika) dia misy rano mihodina "courant d'eau" mahery vaika eo rehefa midina ny ranomasina (marée basse). Marihiko anefa fa raha rano maty (morte eau) dia tsy dia mahery izany fisintonan'ny rano izany.
Manao tourbillon mihodidina io banc io ny rano mivoaka amin'ireo renirano maro mitambatra eo amin'ny rade de Bombetoke. Raha amin'io sary io izany dia havia miankavana. Somary lehibe ny canal ao ankavia, ka ao no betsaka ny rano mivoaka. Noho ilay banc anefa de mihodina ilay courant ka lasa mahazo aty amin'ny village touristique de mivoaka au large indray. Rehefa miakatra ny rano dia ateriny aty amin'ny plage ilay razana satria miakatra ny courant.
Koa mba tsy hitrangan'ny loza re tompoko, ary mba fandraisana andraikitra dia aleo apetrako amin’ny tsirairay ny fahendrena mba tsy hanomezana tsiny an'iza na iza. Aleo misoroka toy izay mitsabo.
Matoky aho fa samy mba efa mahay mijery aterineto (Internet) ny ankamaroan'ny Malagasy. Mba jereo ao ny "Annuaire des marées Mahajanga" fa hohitanao ao ny hoe, amin’ny firy ny ranomasina no midina, ary amin’ny firy izy no miakatra. Raha miakatra ny rano dia manosika aty amin’ny sisiny ny rano fa tsy misintona.
Marihiko eto anefa fa tsy milaza velively ny tenako raha manoratra hoe io antony iray voalazako etsy ambony io no antony tokana mahatonga ny loza fa anisan'ny tena mahatonga itrangan'ny loza.
Hevitra atsipy ny ahy !
[url=http://edpharmacybest.com/]canadian pharmacy cialis soft[/url]
mardi, 12 décembre 2017 05:38
[url=http://edpharmacybest.com/]canadian cialis cheap[/url]
lundi, 11 décembre 2017 16:03
ca auto insurance quotes tempe car insurance
[url=http://autocarins2018.com/my-low-cost-auto-insurance/]aaa auto insurance nj[/url]
dimanche, 10 décembre 2017 22:07
colorado auto insurance requirements occidental auto insurance
[url=http://autocarins2018.com/car-insurance-nm/]most expensive car to insure[/url]
dimanche, 10 décembre 2017 10:53
car insurance plan cis car insurance
[url=http://autocarins2018.com/auto-insurance-companies-in-dallas-tx/]ally auto insurance[/url]
samedi, 09 décembre 2017 14:19
vendredi, 08 décembre 2017 23:34
vendredi, 08 décembre 2017 05:37
mercredi, 06 décembre 2017 07:53
lundi, 04 décembre 2017 20:43